Izithelo kanye nemifino Ukugeza Icubungula Machine Line - China Qingdao Imishini esimile
Hot Okuphakelayo Rubber Extruding Machine
Computer Control Ikholomu Uhlobo Rubber Vulcanizer
Izithelo kanye nemifino Ukugeza Icubungula Machine Line is ukuncela e ukucutshungulwa yemifino eziphambili umqondo emhlabeni wonke, kuhlangene kakhulu China emadolobheni yasekhaya yemifino kanye / noma izithelo ukucutshungulwa ukukhiqizwa. Thina athuthukile wonke ulayini imishini yemifino nezithelo ukucubungula. Amadivayisi ubuchwepheshe abadala. Imifino bahlanza, qobo lwakhe, usike imifino, disinfected, ngikhandlekile kokuhlola okunzima, bangena umhlali emakethe in amaphakheji amancane, bese uya ku enkantini emakethe e big p ...
Fob Inani: US $ 10000-30000
Supply Ikhono: 20 Imisa Inyanga ngayinye
Izithelo kanye nemifino Ukugeza Icubungula Machine Line is ukuncela e ukucutshungulwa yemifino eziphambili umqondo emhlabeni wonke, kuhlangene kakhulu China emadolobheni yasekhaya yemifino kanye / noma izithelo ukucutshungulwa ukukhiqizwa. Thina athuthukile wonke ulayini imishini yemifino nezithelo ukucubungula.
Amadivayisi ubuchwepheshe abadala.
Imifino bahlanza, qobo lwakhe, usike imifino, disinfected, ngikhandlekile kokuhlola okunzima, bangena umhlali emakethe in amaphakheji amancane, bese uya ku enkantini emakethe e amaphakheji enkulu.
Ngemva processing, yemifino nezithelo ne isici ahlanzekile, inhlanzeko, elula futhi ephephile njll
Umugqa ukukhiqizwa ingasetshenziswa ukucubungula: iklabishi, imifino, ukholifulawa, ulethisi, izaqathe, amakhowe, oluhlaza pepper, amazambane, isitshalo seqanda, ubhontshisi oluhlaza, uphizi nezinye nemifino.
Umshini wenziwe izinga okusezingeni SUS304 insimbi engagqwali, ngokuvumelana nezindinganiso yokudla kazwelonke, emgqeni ukukhiqizwa ubamukela bubble roll / khuhla / amanzi spray ubuchwepheshe cleam imifino nezithelo ngokwezinga enkulu.
Imishini emgqeni, ukuphakama kuyinto adjustable ngokulungisa wheel casters / phansi, umoya-mpilo futha igesi, ukuze amanzi egcwele Bubbles ibukeke abilisiwe. Idlidliza we Bubbles ukukhiqiza
ultrasound, ngakho imifino nezithelo ungathola ngokusebenzisa okuhlanzekile azilimazile.
Ukubulala amagciwane umugqa: magciwane isikhathi kungenziwa eklanyelwe bese usetha ngokuvumelana amakhasimende 'izidingo ngokuningiliziwe. Ngokusebenzisa spray okugeza amanzi, wenze imifino nezithelo ukuhlangabezana ukuthekelisa ejwayelekile.
Sprinkler / spray umugqa: yesibili ehlanzekile emva magciwane, ugcine amanzi isifutho amanzi.
umugqa Omiswe; Imikhiqizo uthole omiswe esheshayo, nokuvimbela ukungcola yesibili ngemva magciwane.
Ngokusho izidingo abasebenzisi 'ukuze ungeze i-ozone inzalo, ophezulu spray ibhulashi ukuhambisa okuphothula / oxubile.
Lapho ukusetshenziswa njengoba kungeyona yokuhlanza, ungasebenzisa isethi imishini amaningi aphathe izinhlobo ezahlukene zemifino nezithelo.
Previous: Hot Water Boiling Tank Machine
Okulandelayo: Three Embizeni Parallel Uhlobo Food Processing Retort Machine
commercial yemifino ukuwasha machine
corn processing imishini
corn ukucutshungulwa umshini
usuku ukucutshungulwa umugqa
usuku processing plant
fresh esinezimila impande yemifino Washer ukucutshungulwa umshini umugqa
fresh izithelo nemifino sihlehlela egeza yokuhlanza omiswe umshini
izithelo nemifino yokuhlanza omiswe umugqa
izithelo ngokucubungula yemifino imishini yokuwasha omiswe lokulinganisa umshini
umshini wokuwasha ekhaya yemifino
leaf yemifino ukuwasha machine
ukuwasha machine yokudlela yemifino
izimpande zemifino umshini wokuwasha
yemifino encane umshini wokuwasha
amnandi corn ukucutshungulwa umshini
yemifino kanye umshini wokuwasha izithelo
yemifino nezithelo ukuwasha machine
yemifino ukuwasha machine intengo
yemifino ukuwasha machine nge-ozone
Three Embizeni Parallel Uhlobo Food Processing Retort ...
UHT lokushisa High Sterilisation Okuqhubekayo M ...